Oslo: 40.000 ayaa lagu ganaaxay, markii uu dhowr mar kasoo baxay karantiilka - NorSom News
Booliska magaalada Oslo ayaa habeenkii isniinta xabsiga dhigay nin 22 sano jir ah oo dhowr mar jabiyay karantiilka la galiyay, isaga oo lagu wargaliyay inuu gurigiisa joogo 14 maalmood.
25-kii bishan Maarso ayaa ninkan lagu wargaliyay inuu karantiil galo, kadib markii uu Sweden kasoo noqday. Balse dhowr mar oo kala duwan ayay boolisku banaanka ku qabteen, isaga oo jabiyay karantiilkii la saaray.
Habeenkii isniinta oo ay mar kale boolisku qabteen, ayaa lagu ganaaxay 40.000 kr oo ganaax ah.
22-jirkan ayaa dalbaday waqti uu kaga soo fakaro ganaaxa. Hadii uu diido inuu bixiyo ganaaxa lagu xukumay, wuxuu kiiskan tagi karaa maxkamada.
F.G: Si aad ula socoto wararka NorSom News oo maqal iyo muuqaal ah, halkan riix, kadibna Subcribe ku samee(Abonner).
Xigasho/kilde: Oslo: 40.000 i bot for karantenebrudd
Previous articleNorway oo 194 maxaabiis ah xabsiyada kasii deysay.
Next articleSSB: 3000 soomaali ah ayaa sanadkii tagay helay jinsiyada Norway.